Tencent ဂိမ်း console ကို ခိုး ကူး တရားစွဲဆို မှု အနိုင်ရ - Pandaily
Tencent ဂိမ်း console ကို ခိုး ကူး တရားစွဲဆို မှု အနိုင်ရ
Feb 17, 2022, 21:08ညနေ 2022/02/17 23:04:41 Pandaily
Tianyancha App အရ စီးပွားရေး သတင်းအချက်အလက် မေးမြန်း မှု ပလက်ဖောင်း အရ ပထမအကြိမ် စီရင်ချက်ချ သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ချိုးဖောက် မှု အငြင်းပွားမှုTencent နှင့် Guangzhou Renxing ဗီဒီယို ဂိမ်း စတိုး အကြားဆက်နွယ်မှုကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တရားလို Tencent က သူသည် ဂျပန် ကွန်ပျူတာ ဂိမ်း တီထွင် သူ Nintendo နှင့် & nbsp ဖြစ်သည်ဟု စီရင်ချက်ချ ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တရားဝင် သီးသန့် ဖြန့်ချိ သူသည် တရားခံ အား “Nintendo NSSWITCH CH Edition” ဟုခေါ်သော ထုတ် ကု န်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရောင်းချ သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂိမ်း console store အဖြစ် တရားစွဲ ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် တရားခံ မှ ရောင်းချ သော ဂိမ်း console ထုတ်ကုန် များသည် & nbsp မဟုတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စစ်မှန် ။ ထို့အပြင် ထုတ်ကုန် ထုပ်ပိုး မှုတွင် ထင်ရှားသော “Tencent ” တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ် လို အမှတ်တံဆိပ် များစွာ ရှိပြီး Tencent ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အခွင့်အရေး ကိုလည်း ချိုးဖောက် သည်။
ထို့အပြင် တရားခံ မှ ရောင်းချ သော စစ်မှန်သော ဂိမ်း စက် သည် operating system ကို အနှောင့်အယှက် ပေး သည်ဟု သတ်မှတ်ပြီး အန္တရာယ် ကြီးမားသော ခိုး ကူး မှုစနစ် တပ်ဆင် ထားပြီး မျှတ မှုမရှိသော ယှဉ်ပြိုင်မှု ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
တရားခံ သည် ခိုး ကူး ထားသော ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချ ခြင်းဖြင့် ယွမ် ၂, ၈၀ ၂. ၅ (ဒေါ်လာ ၄ ၄၂) နှင့် nbsp အမြတ် ရရှိခဲ့သည်။ . တရားရုံးက တရားခံ သည် ခိုး ကူး ထားသော Nintendo Switch console များကို ရောင်းချ ခြင်းကို ချက်ချင်း ရပ်တန့် လိုက်ပြီး Tencent အား ဆုံးရှုံး မှုနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး ကုန်ကျစရိတ် များအတွက် စုစုပေါင်း ယွမ် ၂ ၀၄, ၁၂၉ အတွက် လျော်ကြေး ပေးခဲ့သည်။
2019 ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် Tencent သည် Nintendo Switch ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရောင်းချ မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မီဒီယာ အတော်များ များက Tencent နှင့် Nintendo တို့၏ ခိုင်မာသော မဟာမိတ် သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဂိမ်း ဈေးကွက် ဖြစ်သော တရုတ် စျေးကွက် ကိုဖွင့် ရန်ကြိုးပမ်း မှု ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Tencent သည် အာရှ အိုလံပစ် ကောင်စီ နှင့် အာရှ အီလက်ထရောနစ် အားကစား အဖွဲ့ချုပ် တို့နှင့် သဘောတူညီမှု ရရှိ ခဲ့သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Tencent က ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၌ Switch console များ စတင်မိတ်ဆက် ချိန် မှစ၍ Nintendo ထုတ်ကုန်များ သည်တစ် သန်းကျော် တင်ပို့ ခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
Somi Index ကို အတည်ပြုလိုက်ပြီးနောက် အမေရိကန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိတ်ပင်မှု ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းမည်
S&P DJI (S&P DJI) က တနင်္လာနေ့မှာ ကြေညာခဲ့တဲ့ Xiaomi ရဲ့ အကျုံးဝင်မှု အညွှန်းကိန်းမှာ ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်၊ အစောပိုင်းက ကုမ္ပဏီဟာ တရားရုံးစီရင်ချက်ကို ယာယီရုပ်သိမ်းပြီး အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ပိတ်ပင်ထားတဲ့ တရုတ်စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူတွေကို အရေးယူခဲ့ပါတယ်။